MyCurator: Nchịkọta ọdịnaya maka WordPress | Martech Zone
Nchịkọta ọdịnaya bụ ịghọ ihe a maara dị ka ngwá ọrụ bụ isi iji nye ohuru ọdịnaya maka blọọgụ gị, bulie okporo ụzọ ma sonye ma jigide obodo gị. Site na ịhazi ọdịnaya, ịnwere ike inyocha, nyochaa na nyochaa ọdịnaya bipụtara na webụ wee mepụta ya maka ndị na-ege gị ntị. Anyị na-edozi ọdịnaya kwa ụbọchị na Martech - ịchọta gị ozi kachasị mkpa nke nwere ike ị nweta nsonaazụ maka mbọ ahịa gị.
MyCurator bụ ihe ngwugwu zuru oke nke nwere ọdịnaya nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-amụta ịchọta naanị ọdịnaya ịchọrọ. Curate ngwa ngwa site na ederede zuru oke na onyonyo niile nke edemede na nchịkọta akụkọ WordPress maka ọdịnaya emelitere ọhụrụ. MyCurator bu ihe omuma zuru oke maka blọọgụ WordPress. Ọ na-agụ niile mata, blọọgụ, na akụkọ ntanetị ị chọrọ iso. Ederede ọ bụla MyCurator chọtara gụnyere ederede zuru oke na onyonyo niile yana njiri mara na peeji mbụ, nke ziri ezi na WordPress editọ. Nwere ike ijide ngwa ngwa na onyonyo maka post gị a gwọrọ, na-agbakwunye nghọta gị na nkwupụta gị, na -emepụta ngwa ngwa echekwara maka blọgụ gị.
Dị ka onye inyeaka, MyCurator na-eji usoro mmụta ngwanrọ amụrụ ihe wepu 90% ma ọ bụ karịa nke isiokwu na ntanetịime gị, ịdọ aka na ntị na blọọgụ, na-elekwasị anya n'isiokwu ị zụrụ ya ịgbaso. Nke a nwere ike ịchekwa gị ọtụtụ ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ na-enyekwa gị ọtụtụ ihe dị ịtụnanya nke ọdịnaya ezubere, ọ bụghị otu ihe ahụ ka ndị ọzọ na-emegharị tweeting.
Akụrụngwa ahụ malitere dị ka saịtị akwadoro maka azụmaahịa, yana Ntinye ngwa ngwa ka na-eji ọrụ igwe ojii maka oke nhazi AI, na-egbochi ibu ibu nke blog gị. Nke a bụ nkọwa banyere otu o si arụ ọrụ:
Usoro a jiri usoro ọzụzụ na mbipụta akwụkwọ. Na ọnọdụ ọzụzụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-enyere usoro ahụ aka ịmepụta algọridim nke na-enyocha ma na-enyocha ihe ndị ị na-enye (site na nchịkọta nke WordPress Links). Ozugbo ị chere na usoro ahụ na-achọpụta ọdịnaya kwesịrị ekwesị, ịnwere ike ịtọ ya ka ọ bipụta ọdịnaya ahụ na akpaghị aka na blọọgụ WordPress gị.
Onwere nsụgharị na nsụgharị ndị a na-akwụ ụgwọ (Azụmaahịa na limitlọ Ọrụ) nwere oke na ọnụọgụ nke isiokwu ndị a na-enyocha - mana ha ka dịkwa ọnụ ala.
Tags: nchịkọta ọdịnayacontent Marketingatụmatụ ọdịnayanhazionye nchekwawordpress plugin
Inweta ndi Gi na Nchoputa Ochicho